Chikamu: Muchato, Kuroora, Kuroorana
Zita remukomana uyu rinouya kuti rizivikanwe Ilyich? Leonid Ivan Vladimir, ndapota vaviri panguva imwe chete. Sezvo munhu wose akati Vladimir. Uye zvechokwadi, Leonid. Vsevolod, Alexey, Klim zita rekupedzisira harisi pangozi Ulyanov? Leonid. ))) ...
Ndiani anoziva zvakataurwa pamusoro paamai vamwene, mukwambo wako? Pasina mathi, rakanaka, nekunakidza. Ehe, zvangu zvisina maturo, ngazvive zvakanyanyisa! Mwanasikana wenyu anofamba zvakaipa pasi pangu! (pasina chikwata, nekunakidza, chinenge chakanaka) Nezvisina maturo ...
Chii chaanopa kumurume wake nokuda kwekuyeuka kwemuchato wedu 3 gore? Chiratidzo chemuchato. Zvinotendwa kuti mushure memakore matatu ekugara pamwe chete, mhuri, semuviri mhenyu, inowana ganda, iro rinobatana pamwe chete.
Ndiani ndiani? Amai-mbuya, mukomahwa, muroora-mukoma ... ndivana ani? muroora mukoma womunun'una, mukwambo wehanzvadzi ndiye hanzvadzi yomudzimai, muroora-mukoma wemukadzi wemwanakomana.Mwenga ndiye mwanakomana wehama, mukwambo. Mune mamwe mazwi, hanzvadzi yomukoma ...
Mashoko api anotaurwa nemukuru wechikoro paanenge achiedza mhuri yemhuri ??? Hatingavi nemasitategori, tinoita zvose isu ...
Mashoko api anotaurwa nemukuru wechikoro paanenge achiedza mhuri yemhuri ??? Hatingavi nemasitori, tinoita zvose isu ... "Mwari ngaaite kuti hapana munhu aise moto pamoto!" Uye zvino vabereki vako ...
Ndiri kunoroora kechipiri. Zvichida pane kurambidzwa kune chimwe chinhu chechipiri nguva dzekuroorana, zvipfeko, tsika? Zvakanaka, ini ndoga, handifaniri kupfeka chikwata chemuchato uye chifukidziro ... suit suit ...
Ko kana murume wangu asingandiremekedzi? Chii chisina kuremekedza iwe? Uye iwe unomira uchitarisira kwaari kana iye akazvifunga zvakadaro. Ita zvinhu zvose iwe pachako zvaunoda. Uye zviri nani ...
Pakati peiko iwe uri kupfeka chindori chechato muzvikamu zvakasiyana zvenyika? Mutsika, chindori chechato chapfekedzwa pamin'i. VaOrthodox VaKristu vanofanira kupfeka chindori pamin'i yechanza chavo rworudyi, uyewo pane ...
Nzira yekukwevera musikana wacho sei? do :: ** vasikana vanofunga kuti: VANHU VANOFANIRA: Kushungurudza, kunyengedza, kuita zvose nekunakidza !! Kutsigira, kwete kugumbura, kuva akachena, kuva nekunzwa ...
Nzira yekuita sei? Taifunga kuita manheru - kuziva vabereki vedu. Asi zvakazoitika-ivo vakatumira chirevo, vakauya - vakanwa waini, vachikandira zvindori zvesirivha. Ne chokoleti diamond Kushanda: sei ...
Chii chinonzi Alena? Iri ndiro zita rakanakisisa !!!! Izvo zvakafanana naElena, asi nefashoni vypendrezhem Ndichiri mwana, amai vangu vaida kundidana Alena - zviremera hazvina kubvumira ...
sezvavanodana hanzvadzi yomurume wake? Svojak. .... devir inoratidzika .. hama zvichida. hanzvadzi mbiri dzakaroorana. Ndivanaani vabereki vevarume vavo kune mumwe? Ndinoshevedza mukwambo, uye anotsauka ndiye mukoma wemudzimai wake, Dever. mukwambo, ...
mwedzi wehupenyu hwewanano ndewei yemuchato? Kuyera kwemakore kunokosha, zvimwe zvacho hazvina maturo hapana .... mvura Iyi haisi yemuchato, ndeyekuviga kwekuvhara ... hupenyu hwepabheya. Zvakanaka. Vamwe vatenzi havagone kupindira nehafu nehafu. iyi "yakawedzerwa ...
Ndiudzei, kuti varume veChekchen vanobata vakadzi sei? Ona Ruslan Baisarov - Kristina Orbokaite. Ndinovenga Chechen varume. Ndinovenga kumucheto wemuswe wangu ... Nzombe ... nhoroondo yeChimbwa chiyeuchidzo? Zvakarurama zvinoratidzika kwauri .. kubva kune shamwari ...
Zvinorevei maviri kana matatu misoro pamusoro wemurume? Pamwe unoziva zviratidzo nezvinozivikanwa? Izvi zviri mumuganhu wangu. Ini kunze kwemagnetic induction mumisara miviri musaoni chero ...
Zvakadini kana murume ari kureva nhema? Kushamiswa kwemagetsi kwechinyorwa ... Nhema dzangu zvakare, uye dzimwe nguva iye pachake haazive nei. Unogona kuramba kunyange mashoko avo pachavo. Uye pd zvinhu zvishoma uye zvakadaro ....
Chii chingapa vabereki kuvhichato? 27Y Zvaanoda. Tsvaga zvingangove zvavanoda kutenga, asi hazvibatsire ... chikwapu uye handcuffs Binoculars nekambasi. tekiti kune inodziya ...
Mibvunzo ye88 mu database yakagadzirwa mu 0,778 masekondi.